सबैलाई चकित पार्दै अन्तत: ओली-प्रचण्डलाई लाग्यो यस्तो झट्का, अब के हुन्छ ? — Sanchar Kendra
सबैलाई चकित पार्दै अन्तत: ओली-प्रचण्डलाई लाग्यो यस्तो झट्का, अब के हुन्छ ?
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोक्ने विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले इन्चार्ज र सहइन्चार्जबारे सचिवालय बैठकमा पेस गरेको प्रस्तावप्रति वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालपक्षले आपत्ति जनाएको छ ।
बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले आफूहरुले ल्याएको प्रस्ताव सच्याउने सम्भावना नरहने भन्दै त्यसैमा सहमति जनाउन अरु नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।
तर, नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमले प्रस्ताव नसच्याएसम्म अघि बढ्न नसक्ने भन्दै इन्चार्ज र सहइन्चार्जहरुसँगै केन्द्रीय सदस्य र पोलिट्ब्यूरोको कार्यविभाजनसमेत एकसाथ टुंगो लगाउनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
तर, ओलीपक्षले पार्टीमा दोहोरो जिम्मेवारी नदिने विषय स्वीकार्य हुन नसक्ने र राज्यको पदमा पुग्नकै लागि राजनीति गर्ने भन्दै एकल जिम्मेवारीले पार्टी मजबुद् बन्न नसक्ने तर्क गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू युरोप भ्रमणबाट फर्किएपछिमात्र थप छलफल हुनसक्ने भन्दै बैठक स्थगित गरिएको थियो ।
यसअघि अध्यक्ष दाहालनिकट मानिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पछिल्लो समय दोहोरो जिम्मेवारीको पक्षमा देखिएका छन् । दोहोरो जिम्मेवारीसम्बन्धी छलफलमा अध्यक्ष दाहाल भने मौन बसेको बताइएको छ । ओलीपक्षीय नेता एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललगायतले त बेला–बेला घुमाउरो पारामा सामाजिक सन्जालबाटै एकल जिम्मेवारीको विरोध गर्दै आएका छन् ।
अर्को बैठक युरोप भ्रमणपछि : पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार अब प्रधानमन्त्री ओलीको युरोप भ्रमण सकेर आएपछि मात्र सचिवालय बैठक बस्नेछ । प्रधानमन्त्री शनिबारदेखि युरोपको साताव्यापी भ्रमणमा जाने बताइएको छ ।
पार्टीको आज बस्ने सचिवालय बैठकले केन्द्रीय सदस्यको कार्य विभाजन तथा जिल्ला कमिटीको इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको थियो । केन्द्रीय सदस्यको कार्य विभाजन र जिल्ला इञ्चार्ज तथा सहइञ्चार्ज तोक्ने विषयमा मङ्गलबारदेखि नियमित बैठक बस्दै आएको थियो ।
कार्यविभाजन सकाएपछि बाँकी रहेका साङ्गठनिक एकीकरणका अन्य काम र थप कार्यविभाजनका विषयमा समेत प्रवेश गर्ने पार्टीको तयारी थियो । यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले पत्रकारलाई भौतिक आक्रमणको धम्की दिने इटहरी नगरपालिकाका मेयर द्वारिकालाल चौधरीलाई कारबाहीको माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरु सुजाता परियार र हिरा गुरुङले कानुन हातमा लिन खोज्ने मेयर चौधरीलाई फौजदारी अपराधअन्र्तगत् मुद्दा चलाउन माग गरे ।
सांसद मीना सुब्बाले सुनसरीकै धरान उपमहागरपालिकामा फैलिएको डे्रगुरोगको महामारी नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले संसदको शून्य समयमा सांसदहरुले ध्यानाकर्षण गराएका विषयमा सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सभामुखसँग माग गरे ।
सत्तारुढ दलका अर्का सांसद सूर्यकुमार पाठकले प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन गर्न जनप्रतिनिधि नै सक्रिय रहेको आरोप लगाउँदै यस्ता कार्य तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरे ।
सांसदहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, लालकाजी गुरुङ, सञ्जयकुमार गौतम, सुदन किराती, ज्ञानकुमारी छन्त्याल, सीतादेवी यादवलगायतले समयसामयिक विषयमा देखिएका विभिन्न समस्या समाधानको माग गरे ।
यस्तै प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको दोस्रो बैठकले ‘विनियोजन विधेयक, २०७६ लाई विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकमाथि जेठ २७ गतेदेखि आगामी असार ६ गतेसम्म छलफल हुनेछ ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा छलफल हुने जानकारी दिए । उक्त विधेयकमाथि सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै डा खतिवडाले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले रासायनिक मल आयातलाई थप सहज बनाउन लागिपरेको बताए ।
रासायनिक मल आयातलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले सरकार–सरकार (जिटुजी) अवधारणामा काम गर्ने तयारी गरेको समेत उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीले बजेट मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने गरी तय गरिएको जानकारी दिए ।
विधेयकमाथि सांसद प्रेम सुवाल, पार्वती डिसी चौधरीलगायतले बोलेका थिए । त्यसअघि डा खतिवडाले ‘विनियोजन विधेयक, २०७६’, ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७६’ र ‘ऋण तथा जमानत (तेइसौंँ संशोधन) विधेयक, २०७६’ प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ २७ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।